Tababarka Xirfadaha Iswiidhis
Ma u baahantahay in aad ku darto xirfadahaaga wax si aad u hesho shaqo aad rabto ama aad u hesho koorso? Sidoo kale waxaanu bixinaa adeegyo kala duwan oo kaa caawin kara in aad gasho suuqa shaqadda ee Iswiidhan. Xagayaga waxaad wadan kartaa koorso, heli doontaa taagerada raadinta shaqada ama bilaabi doontaa shirkadaada. Nala soo xidhiidh anaga oo waxaanu kuu sheegi doonaa wax badan oo ku saabsan goobta kuu dhow.
Noqo mid guul gaadha gudaha Iswiidhan!
Dhammaan koorsooyinkayaga tababarka xirfaddeed (Ogow: Hadda waxaa lagugu jihayn doonaa boggag Af Iswiidhish ah)
SFI waa Af Iswiidhishka dadka bilowga ah. Waxaad barataa Luqadda Iswiidhiska oo aad barataa sida loo akhriyo, qoro oo loogu hadlo oo waxaad fahamtaa Afka Iswiidhishka. Qaadashada Koorso SFI waxay awood kuu siinaysaa in aad dareento in aad qayb ka tahay bulshadda Iswiidhan si degdega. Tani waxay kuu ogolaan doontaa in aad horumarto si aad u kordhiso waxbarashada ama hesho shaqo.